FANJIFANA ETO MADAGASIKARA : “Mitotongana ambany be ny fahefa-mividin’ny Malagasy”
Araka ny fanazavana noentin’ny Filohan’ny RNDC na ny tambajotram-pirenena miaro ny zon’ny mpanjifa, Rabetsara Lita dia mitotongana ambany dia ambany ny fahefa-mividin’ny Malagasy, amin’izao fotoana izao. 16 septembre 2020
Vokatr’izany dia saika miaina anaty fahantrana lalina ny ankamaroan’ny vahoaka.
Nambarany fa ilaina fanampiana betsaka avy amin’ny Fitondram-panjakana ny hahafahana mampiakatra izany, miankina amin’ny alalan’ny politika mazava apetrany eo amin’izay lafiny fanjifana izay. « Miankina tanteraka amin’ ny finiavana ara-politika ananan’ny Mpitondra ny fampiakarana ny fahefa-mividin’ ny vahoaka. Fanapahan-kevitra politika ny hisian’ ny fiandrianam-pirenena ary mitovy amin’ izay koa ny fisian’ ny fiandrianana ara-bola.
Tsy tokony hiankina amin’ ny lalantsaina mampety ny Firenena vahiny, fa isika mila mametraka politika ara-bola mifanaraka amin’ ny toekarenao sy ny filàn’ ny vahoaka ao amin’ ny Firenenao”, hoy ny nambarany.
Araka ny fanazavana nomeny dia anisany tena mahatonga ny fahefa-mividin’ny Malagasy ho ambany ny fisian’ny MID na ny tsena ifanankalozan’ny vola vahiny anatiny izay mahatonga ny sandam-bola Ariary hitotongana satria misy ny fitsipika mifehy ny MID, araka ny fanazavany. Nambaran’ity mpiaro ny zon’ny mpanjifa ity ihany koa fa ny ankamaroan’ireo Mpitondra teo aloha nifandimby teto amin’ny Firenena dia saika nobaikoin’ireo Firenena matanjaka avokoa. Vokatr’izany dia tsy nisy ny tetika sy paika tsara lamina noentina nitondrana ny toekarena Malagasy fa niankin-doha tamin’ireo Firenena vahiny avokoa.
Vahaolana narosony mba hahafahana mampiakatra ny fahefa-mividin’ny Malagasy ka hahatonga an’i Madagasikara ho lasa Firenena matanjaka tahaka an-dry zareo ny fametrahana ny sandam-bola Ariary ho raikitra. « Inona ny olana raha mametraka sandam-bola raikitra isika ? Isika Malagasy ihany no mamaritra ny sandan’ ny Ariary raha ampitahaina amin’ ny Dôlara sy ny Euro.
Raha misy aza izany, tsy maintsy ho tonga eto amintsika foana ny vahiny hividy volamena, hividy lavanila ary hividy ireo harena an-kibon’ ny tany maro », araka ny fanazavany hatrany.